ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏အံ.ဖွယ်(၉)ပါး - မှတ်စုစာအုပ်
ပြဒါးရှင် ဘုရား တို့ဖြစ်သည်။
အံ့ဖွယ် (၁) - ပတ္တမြား မျက်ရှင် ဘုရား
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့အထက်ပစ္စယံ မှာ အံ့ဖွယ် (၁) ဖြစ်တဲ့ ပတ္တမြား မျက်ရှင် ဘုရား ရှိပါတယ်။ ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရားကို ရှေးတုန်းက မင်းညီမင်းသားတွေ စစ်ထွက်ခါနီးတိုင်း သူတို့စစ်နိုင်ဖို့ အရေး ၊ လူတွေ သေကြေပျက်စီးဖို့ အရေး ဘုရားရှင်ထံမှာ လာရောက် နားပူနားဆာ လာလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးသုမင်္ဂလနဲ့ ပေးတွေ့ လိုက်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်..။
အထက်ပစ္စယံကို အမျိုးသားတွေပဲ တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးတော့ တက်ရောက်ခွင့်ရအောင်... မှတ်ပုံတင် ၊ ရ၀တ ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ အစရှိတာတွေ ယူလာပြီး ဂေါပကို လာဘ်တင်ရပါမယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း ဗြုန်းကနဲ ထလာတာဆိုတော့ လန်ဒန်-မြန်မာပြည် သံရုံးကပေးလိုက်တဲ့ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာကလွဲလို့ ဘာထောက်ခံစာမှ မပါဘူး..။
အထက်ပစ္စယံ တက်ပြီး ဖူးမျှော်ခွင့်မရရှိတဲ့ သူတွေ အတွက် ရွှေတိဂုံဘုရား မုခ်တိုင်း မှာ Flat screen TV ကြီးနဲ့ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရားကို ပြသထားပါတယ်။ အထက်ပစ္စယံကိုတော့ ဗုဒ္ဓဟူးထောင့် ကနေ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အထက်ပစ္စယံဟာ အလွန်ပဲ အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်လှပြီး လေကောင်းလေသန့် တစ်ဝကြီး ရှူနိုင်သလို ရင်ပြင်တော်ပေါ်ကို အပေါ်စီးကနေ ဖူးတွေ့ နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပစ္စယံကနေ ဆင်းလာပြီး လက်ယာရစ် ဆက်ပြီး လျှောက်လာခဲ့ရင်တော့ စနေထောင့် ဆိုတဲ့နေရာလေးကို ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ စနေထောင့်အလွန် ရှေ့ တည့်တည့်မှာ ရေသန့် စက်ကြီး အကြီးကြီး ကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ အမောပြေ ၀င်သောက်လိုက်ပါအုံး . ။ အဲဒီ ရေသန့် စက်ရဲ့ ဘယ်ဖက်မှာတော့ ...
အံ့ဖွယ် (၂) - ၀ိဇ္ဇ္ဇာဇော်ဂျီ ဘုရား
ဘာလို့ ဝိဇ္ဇာဇော်ဂျီ ဘုရားလို့ ဘွဲ့ အမည်ပေးထားသလဲ ဆိုတော့ ဘုရားရဲ့ လှိုဏ်ဂူတော် အပေါ် မှာ ရေးချယ်ထားတဲ့ ကနုတ်ပန်းတွေ နေရာကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဇော်ဂျီပုံတွေ ကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
၀ိဇ္ဖာဇော်ဂျီ ဘုရားကနေ ဘယ်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ လမ်းလေးအတိုင်း အတွင်းကို ဆက်သွားရင်တော့
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ် တုန်းကဆိုရင် ဒီ နေလ ဘုရားမှာ သာသနာပွဲတွေ ၊ အဓိဋ္ဌာန်ပွဲတွေ နဲ့တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ပါပဲ။ အခုအချိန်မှာတော့ ဘာမှ မရှိသလောက် ပြောင်ရှင်းနေပါပြီ ။ ဂူထဲက ဘုရားကိုပဲ ပင့်ပြီး အစားပြန်ထိုးထားသလား လို့ တောင် သံသယစိတ်လေးနဲ့တွေးမိသေးတယ်။
နေလဘုရားကို ဖူးပြီးရင် လက်ယာရစ် ဆက်ပြီး ပတ်ပါ။ ကြာသပတေးထောင့် ကို ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ အထက်ပစ္စယံနေရာလောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံး... ။ ရွှေချထားတဲ့ ရုပ်တုတစ်ခု
ဥက္ကလာပမင်းကြီး ဟာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို တည်ထားခဲ့တဲ့ မင်းကြီးပေါ့ ။ ဆံတော် ကြွလာတဲ့အခါမှာ မြစ်ထဲအထိ ရေအစိုခံပြီး ဆံတော်ကို ကြိုခဲ့တယ်လို့မှတ်သားဖူးတယ်.. ။
အဲဒီကနေ ဆက်ပြီး ပတ်လိုက်အုံး ..။ လက်ယာရစ်အတိုင်းပဲ ဆက်ပြီး ဖူးလာခဲ့ရင် ရာဟုထောင့် အကျော်လေးမှာ..ရွှေတိဂုံ အောင်မြေ ဆိုတာကြီး တွေ့ မယ်.။ အဲဒါ အောင်မြေ အစစ် မဟုတ်ဘူး.. အတုကြီး ။ တစ်ကယ့်အောင်မြေအစစ်က တနင်္ဂနွေထောင့် နားမှာ ရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူများအောင်မြေ ကိုယ်အောင်မြေပေါ့.. ။ အောင်မြေနင်းလိုက်မယ်.. လာလေရော့ .. အင်္ဂလန် ဗီဇာ နောက်ထပ်ရပါစေ.....။
အောင်မြေကနေ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးတော်ကို ဖူးမြော်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘီလူးပန်းဆိုင်းနေရာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ထူးခြားတာ ဖူးမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အောင်မြေရဲ့ ညာဖက် စောင်းတန်းထဲမှာ....
ရုပ်ပွားတော် အရှေ့ မှာ ကြိုးတစ်ချောင်း ကျနေတယ်.. အဲဒီကြိုးက မျက်နှာကြက်ပေါ်က ယပ်တော်နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်..။ အပူငြိမ်းခြင်သူများ ယပ်တော်ခပ်ပေးပြီး ဆုတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
ရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ဘယ်ဖက်ခြမ်းမှာတော့
အံ့ဖွယ် (၃) - ရှင်စောပု ဘုရား
မွန်ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပု တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ရှင်စောပု ဘုရားကို ဖူးမြော်ရပါမယ်။ ဘုရားရဲ့ ရှေ့ မျက်နှာစာမှာ ပေါက်နေတဲ့ အပင်ကြီးမှာ သမီးရည်းစား စုံတွဲတွေ၊ စာမေးပွဲအောင်ခြင်သူတွေရဲ့correction pen နဲ့ ရေးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သ၀ဏ်လွှာတွေ၊ ဆုတောင်းတွေကလည်း ဗရပွထနေပါတော့တယ်..။
ဖူးပြီးရင်တော့ လက်ယာရစ်အတိုင်း ပတ်လိုက်ပါအုံး.. သောကြာထောင့် ..ဒဂုံဒေါ်ခင်ခင်လေး အဆောက်အဦးနဲ့မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာ
အံ့ဖွယ် (၄) - ဆံတော်တွင်း ရုပ်ပွားတော်
တန်ဆောင်းထဲက နဂါးတွေ ၊ မနုဿီဟ ပုံတွေနဲ့ငုံပြီး တည်ထားတဲ့ နေရာမှာ လှိုဏ်ဂူ ရှိသတဲ့..။ အဲဒီ လှိုဏ်ဂူထဲမှာ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ ရေကြောနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ရေစီးကြောင်း ရှိတာကြောင့် ဧရာဝတီမြစ် ရေတက်ရေကျ အတိုင်း အထဲက ရေစီးကြောင်းကလည်း အတက်အကျရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆံတော်တွေ ဋ္ဌာပနာခါနီးမှာ ဒီရေစီးကြောင်းက ရေတွေနဲ့ဆေးခဲ့တယ်လို့ လည်း မှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ် ။
ဒဂုံဒေါ်ခင်ခင်လေး အဆောက်အဦး ရှိတဲ့ လမ်းလေးအတိုင်း ဆက်သွားလို့ ရှိရင်.. မြောက်ဘက်မုခ် ဓာတ်လှေကား နားမရောက်ခင်မှာ...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်လောက်တုန်းက ဒီယက္ခ ဟာ အခုလို မိုးလုံလေလုံ မှန်ကာ နဲ့ မဟုတ်ဘူး..။ မိုးထဲလေထဲ ဒီအတိုင်း ပစ်ထားတာ။ ဘယ်သူက ဘယ်လို ဆောက်ပေးလိုက်တယ်မသိပါဘူး...။ အခုတော့ အမိုးအကာ နဲ့ အုန်းပွဲ ငှက်ပျော်ပွဲ တွေ နဲ့ ပွဲတော်တွေ ဘာတွေ တည်လို့ ..။
အဲဒီ လောကပါလ ယက္ခမယ်တော်ကြီး ဘေးကနေ ဆက်လျှောက်သွားရင်တော့ ...
အံ့ဖွယ် (၇) - ရှင်မထီးဘုရား
ရှင်မထီး ဘုရားကနေ ဆက်လျှောက်လာရင်တော့ ဘိုးမင်းခေါင် ရုပ်ထုကို ရောက်မယ်..။
ဘိုးမင်းခေါင်လည်း အရင်တုန်းက မိုးထဲလေထဲမှာပဲ...။ ဆေးလိပ်တွေ ကပ်ကြ.. ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို နှိပ်ကြ နဲ့ ။ အခုတော့လည်း မှန်လုံခန်းထဲမှာ မြိန့် မြိန့် ကြီး ထိုင်လို့ . အဲယားကွန်းမပါ ဘာမပါ..။
ဘိုးမင်းခေါင် ဘေးမှာတော့ ကျောက်စာတွေ ရှိတယ်.. ဓာတ်ပုံတော့ မရိုက်ခဲ့ပါ..။ အဲဒီကနေ ဆက်သွားလို့ ရှိရင် တန်ဆောင်းတစ်ခု ကို တွေ့ ပါလိမ့်အုံးမယ်..။
တန်ဆောင်းရဲ့ အတွင်းဖက်ဆုံး ညာဖက်ခြမ်းမှာ မျက်ရှင်ဘုရား ဆိုတာ ရှိပါတယ်.။ ဟိုးတုန်းကဆိုရင် အဲဒီနားမှာ အဘိုးကြီးတစ်ယောက် .. မှန်ဘီလူး တစ်လက်နဲ့ထိုင်နေတယ်.. ။ သူ့ ဆီက မှန်ဘီလူး တောင်းပြီး မျက်လုံးတော်ကို သေချာပြူးကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ဗျာ..။
အခုတော့ အဲဒီ မှန်ဘီလူးရော.. အဘိုးကြီးရော မရှိတော့ပါဘူး..။
အဲဒီတန်ဆောင်းက ပြန်ထွက်တာနဲ့ရှေ့ အလယ်မှာ ယက္ခအနွယ်တော်တွေ တည်ထားတဲ့ ဘုရားရှိတယ်..။ ပြောကြတာပါပဲ..။ ယက္ခမျိုးနွယ်တွေ လာကန်တော့ကြတာပေါ့..။
နောင်တော်ကြီး စေတီဟာ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အရင် တည်ခဲ့တဲ့ စေတီတော် ပါ။ ပါးစပ်ရာစ၀င်တော့ မပြောတော့ပါ.. ။ နောင်တော်ကြီး ဘုရားပေါ်တက်ချင်ရင်တော့ မှတ်ပုံတင် ထားခဲ့ရပါမယ်..။ ကိုယ့်မှာက passport ပဲ ပါတာဆိုတော့ မတက်ခဲ့ရပါဘူး..။
အောင်မြေ အစစ်ဟာ ဒီနောင်တော်ကြီးစေတီ နားမှာ ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်..။ တန်ဆောင်းထဲမှာတော.
အံ့ဖွယ် (၅) - ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ဘုရား
ရှင်အဇ္ဖဂေါဏ ဆိုတာ ပုဂံရာဇ၀င်ထဲက ဖိုထိုးတာ မအောင်လို့ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း မျက်လုံး နှစ်ဖက် ဖောက်ထုတ်ပြီး ဓါတ်လုံးကို မစင်တွင်းထဲ လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှ ဓါတ်ပြုပြီး ဓာတ်လုံးအောင်သွားလို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မျက်လုံး ၂ လုံးကို ဈေးမှာ အစားသွားဝယ်ခိုင်းလိုက်တာ .. ဈေးကွဲချိန်ဆိုတော့ ရတဲ့ မျက်လုံးက ဆိတ် မျက်လုံး တစ်ဖက် ရယ်.. နွားမျက်လုံး တစ်ဖက်ရယ်..ပဲ ရခဲ့တယ်.. ။ အဲဒါနဲ့ ပဲ ရတဲ့ မျက်လုံး ၂ လုံးကို အစားပြန်တပ်လိုက်တာ.. အဇ္ဖ (ဆိတ် ) ဂေါဏ (နွား) လို့အမည်တွင်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုတာပဲ..
ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ တန်ဆောင်းကနေ အထွက် ညာဖက်မှာ တန်ဆောင်းတစ်ခု တွေ့ ရပါအုံးမယ်.. အဲဒါကတော့
အံ့ဖွယ် (၆) - ဘိုးဘိုးအောင် ဂူဘုရား
အခုမှပဲ အံ့ဖွယ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့ ရတော့တယ်..။ အံ့ဖွယ် ၆ .. ဘိုးဘိုးအောင် ဂူဘုရားတဲ့ ..။ အံ့ဖွယ်မှန်သမျှ လာဖူးကြမှာ စိုးလို့ ... ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ထားတာ ဒီဘုရား နဲ့ နောက်ဘုရား တစ်ဆူ ပဲ ကျန်တယ်.. ။
ဒီတန်ဆောင်းကနေ ထွက်ရင်တော့ တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်ထောင့်ကို ရောက်ပါလိမ့်မယ်.. ဂြိုဟ်တိုင်မှာ ရေသပ္ပါယ်ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်တာ အုံးသီးတဲ့ခင်ဗျ..။အုန်းသီးပိုင်ရှင်ကလည်း ဂြိုဟ်တိုင်နောက်နားက ပန်းကပ်လှူတဲ့နေရာမှာ မထားဘဲ ရေသပ္ပါယ်တဲ့နားလာထားတော့ ကြည့်ရတာ မျက်စိနောက်လိုက်တာ..။ နောက်တစ်ခုကတော့ ယပ် ပါခင်ဗျ..။ ရေးထားတာကတော့ မလေးရှားမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့မောင်မင်းကြီးသား အဆင်ပြေပြီး ပိုက်ဆံများများပို့ပါစေတဲ့ခင်ဗျား..။ ကဲ မောင်မင်းကြီးသားရေ.. လျှာထွက်အောင် သာ ရှာပေတော့..။
တနင်္ဂနွေထောင့်ကနေ နောက်ကို တစ်ခွင်ဆုတ်.. အဲလေ.. နောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပုဏ္ဏားကြီးတစ်ယောက် ဗေဒင်တွက်နေလိမ့်မယ်.. ခြစ်ထွေး ဗေဒင်.. ကျောက်သင်ပုန်းပေါ် စာလေးခြစ်လိုက် .. တံတွေးနဲ့ ထွေးပြီး ပြန်ဖျက်လိုက်နဲ့ ။ ခိုတွေကို အစာကျွေးနေတာ တွေ့ ပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒီ ပုဏ္ဏားကြီးနောက်က ထီးတော်ပုံ စံတူ နောက်ကွယ်မှာ ...
ဘိုးဘိုးအောင် ဆုတောင်းပြည့် ဘုရား
ဘိုးဘိုးအောင် ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားတဲ့.. အဲဒီ ဘုရားရဲ့ ဘေးနားက ကပ်လျက် လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကနေ အပေါ်ကို တက်သွားလိုက်.. အပေါ်ကို ရောက်ရင် ညာဖက်ချိုး... တန်ဆောင်းလေး ၂ ခု တွေ့ မယ်.. အတွင်းဖက်ဆုံး တန်ဆောင်းကို အရင်ကြည့်လိုက်ပါ....
ဓမ္မစေတီ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရား ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်တုန်းကတော့ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်သူ၊ ဘုရားဖူးလာသူတွေနဲ့ စည်ကားခဲ့ပါတယ်... မျက်မှောက်မှာတော့ ဘုရားဖူးတွေ အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိပါတော့တယ်..။ အရင်တုန်းက ဖူးမြှာ်ခံခဲ့တဲ့ ဓမ္မစေတီ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားဟာ ခန္ဓကိုယ်ပေါ်မှာ စိန်ရွှေရတနာ ကျောက်တွေနဲ့ အပြည့် ပါပဲ..။ အခုတော့လည်း အဲဒီရုပ်ပွားတော်ကို ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးလုပ်တော့ ဘယ်သူက မသွားတယ်မသိပါဘူး.. လက်ရှိအဖူးအမျှော်ခံနေတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မှာ ဘာမှကို မရှိပါ..။ အစားထိုးလိုက်ကြပါပြီ.. ကောင်းကြသေးရဲ့ လားကွယ်ရို့ ..။ အဲဒီ ဓမ္မစေတီ ဘုရားရဲ့ ဘေးမှာတော့ ကျားခြင်္သေ့ဘုရားဆိုတာ ရှိပါတယ်..။
အဲဒီကနေ ပြန်ထွက်ရင်တော့ အရှေ့ ဘက်မုခ် ဆောင်းတန်းကို ရောက်ပါမယ်.. အာရုံခံ တန်ဆောင်းထဲက ရုပ်ပွားတော်က်ို သေချာဖူးမျှော်ကြည့်ပါ..။
အံ့ဖွယ် (၈) - လက်ပက်လက်ဘုရား
တနင်္လာထောင့် မှာရှိတဲ့ တန်ဆောင်းထဲက ဘုရားရှင်ရဲ့ ဘွဲ့ တော်ဟာ ကကုဿာန် လား .. ကောဏဂုဏ် လား မမှတ်မိတော့ပါ..။ ဘုရားရှင်ရဲ့ညာဖက်လက်တော်ဟာ ပက်လက်ကလေး ဖြန့် နေတာကြောင့် လက်ပက်လက် ဘုရားလို့ မှည့်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။ တစ်ခြား တန်ဆောင်းတွေထဲမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ လုံးဝမတူပါ..။
တန်ဆောင်းကနေ အထွက်မှာတော့ တံခွန်တိုင်လေးကို ရှာကြည့်ပါ..။ အင်္ဂါထောင့်ရဲ့ အရှေ့ မှာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်..
အဲဒီတံခွန်တိုင်ကို တွေ့ တယ်ဆိုရင်တော့ တံခွန်တိုင်ဘေးမှာ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေး ရှိပါမယ်.. အဲဒီလမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးအတိုင်း လျှောက်သွားလိုက်ရင် ဘယ်ဖက်ခြမ်းမှာတော့ ...
အံ့ဖွယ် (၉) - ပြဒါးရှင် ဘုရား
ပြဒါးရှင်ဘုရား ဟာ နဖူးတော်မှာ ပြဒါးရှင်ကို ထည့်သွင်းမြှုပ်နှံ ပြီး ထုလုပ်ပူဇော်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။ အံ့ဖွယ် ၉ .. ပြဒါးရှင်ဘုရား လို့ ရေးထားတာ တွေ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်..။ အံ့ဖွယ် ဆိုပြီး စာတမ်း ချိတ်ထားတာ ၉ ပါး ရှိတဲ့ အထဲက ၂ ပါးပဲ အံ့ဖွယ်ဆိုပြီး ချိတ်ထားပါတယ်.. ။